Wooden Handle Stick Non-Stick Silicone ချက်ပြုတ်ပစ္စည်းများ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ ယ်ခြင်း WoopShop®
သစ်သားလက်ကိုင် Non- Stick ဆီလီကွန်ချက်ပြုတ်အသုံးအဆောင်အစုံ
$29.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $53.99
အရောင် အနက်ရောင် 9PCS-A အနက်ရောင် 9PCS-B က Mint အစိမ်းရောင် 13PCS PINK 11PCS Mint အစိမ်းရောင် 12PCS-B PINK 12PCS Mint အစိမ်းရောင် 12PCS-A အနက်ရောင် 11PCS အနက်ရောင် 12PCS အနက်ရောင် 10PCS-A အနက်ရောင် 10PCS-B က အစိမ်းရောင် 10PCS-B က အစိမ်းရောင် 10PCS-A အစိမ်းရောင် 9PCS-B က အစိမ်းရောင် 9PCS-A အစိမ်းရောင် 11PCS အစိမ်းရောင် 12PCS PINK 10PCS-A Mint အစိမ်းရောင် 11PCS PINK 10PCS-B က Mint အစိမ်းရောင် 10PCS-A PINK 9PCS-A Mint အစိမ်းရောင် 9PCS-A PINK 9PCS-B က
အနက်ရောင် 9PCS-A အနက်ရောင် 9PCS-B က Mint အစိမ်းရောင် 13PCS PINK 11PCS Mint အစိမ်းရောင် 12PCS-B PINK 12PCS Mint အစိမ်းရောင် 12PCS-A အနက်ရောင် 11PCS အနက်ရောင် 12PCS အနက်ရောင် 10PCS-A အနက်ရောင် 10PCS-B က အစိမ်းရောင် 10PCS-B က အစိမ်းရောင် 10PCS-A အစိမ်းရောင် 9PCS-B က အစိမ်းရောင် 9PCS-A အစိမ်းရောင် 11PCS အစိမ်းရောင် 12PCS PINK 10PCS-A Mint အစိမ်းရောင် 11PCS PINK 10PCS-B က Mint အစိမ်းရောင် 10PCS-A PINK 9PCS-A Mint အစိမ်းရောင် 9PCS-A PINK 9PCS-B က
သစ်သားလက်ကိုင် Non-Stick ဆီလီကွန်ချက်ပြုတ်ပစ္စည်းများ - BLACK 9PCS-A backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အပိုင်းပိုင်း၏အရေအတွက်: > 10
လက်မှတ်: အီး / ဥရောပသမဂ္ဂ,CIQ,FDA က,LFGB,SGS
အမျိုးအစား: Cooking Tools Set
ပစ္စည်း: silicone + သစ်သားလက်ကိုင်
အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်: -40-210 စင်တီဂရိတ်
Function ကို: Spatula Ladle ဥ Beaters ဇွန်း
ကုန်ပစ္စည်း: silicone မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ silicone မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, Spatula, Spoon, Tongs, Ladle, Spaghetti ဆာဗာ, Lotted Turner မီးဖိုချောင် Tools များသတ်မှတ်မည်
အရောင်: အစိမ်း၊ မီးခိုးရောင်၊ ပန်းရောင် / Mint အစိမ်း၊ အနီ
ဆီလီကွန်အသုံးအဆောင်အစုံသည်မီးဖိုချောင်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ အစားအစာများနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်သော၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လွယ်သောမုန့်၊ ထောပတ်၊ ရေခဲမုန့်စသည်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Turner၊ ဇွန်း၊ တံဖျာများ၊ ခေါက်ဆွဲချိတ်နှင့်အစားအစာနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်လိုအပ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ အဆိပ်မဟုတ်သော၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ မကပ်သော၊ အကြမ်းခံ။ ၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအတွက်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ
သင့်လျော်သော - မိုက်ကရိုဝေ့မီးဖို၊ မီးဖို၊ မီးဖို၊
Хорошийнабор, компактный။ естьвсечтонужно။ Доставкабыстрая.Цветправдопоказалсянемногозеленоватым, ноэтоотосвещениязависит။
စတိုးဆိုင်၏ဝန်ဆောင်မှုသဘောထားသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ပေးပို့နှုန်းသည်အလွန်မြန်သည်။ ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီ။ ဒီတန်ဖိုးကအရမ်းမြင့်တယ် အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဝယ်သင့်တယ်!
အရည်အသွေးသည်ကောင်းမွန်သည်၊ ခံစားမှုသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ကောင်းသော၊ အရောင်လည်းကောင်းမွန်သည်
တန်ဖိုးစူပါမြင့်မားသည်! ! ! ငါ၏အ Non-Stick ဒယ်အိုးအတွက်အလွန်သင့်လျော်သော